वायु प्रदुषण बढेसँगै चार दिन विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय – Health Post Nepal
वायु प्रदुषण बढेसँगै चार दिन विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
२०७७ चैत १६ गते १४:२३
कहिले आउला काठमाडौंको मौसममा सुधार?
बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले मौसमी प्रतिकूलताका कारण शिक्षण संस्था बन्द गर्नुपरेको जानकारी दिए।
बैठकमा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलिया, विज्ञान सचिव डा. सञ्जय शर्मा, मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्मा, सहसचिव डा.हरी लम्साल, शिक्षा, तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुष्ठ अर्याल लगायतको उपस्थिति थियो।
बैठकअघि मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग परामर्श गरेका थिए। लगत्तै मन्त्रालयमा भएको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले लाखौ विद्यार्थीमा हुनसक्ने स्वास्थ्य प्रतिकुलताका कारण सबै शिक्षणसंस्था बन्द गर्नुपरेको बताए।
यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदुषणले गर्दा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखा पर्ने हुँदा सचेत रहन आग्रह गरेको थछ।
मन्त्रालयले वायु प्रदुषणले जनस्वास्थ्यमा विभिन्न प्रभाव पर्ने भन्दै घरभित्र नै बस्न अनुरोध गरेको हो।
घरबाहिर खुल्ला स्थानमा नबस्न र घर बाहिर मर्निङ वाकमा नजान सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ।
केही दिन यता काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानमा वायु प्रदुषण बढेसँगै स्वास्थ्य समस्यामा जटिलता थपिँदै गएको छ।
काठमाडौंका उपत्यकाबासीमा रूघाखोकी, दम, एलर्जी, आँखा पोल्ने र अन्य श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगकाे जोखिम बढेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले वायु प्रदुषण अत्याधिक बढेकाले अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरे।
‘अत्यावश्यक काममा बाहेक घर ननिस्कौँ, मनिङ वाक नजाऔँ, घरभित्र बसेर व्यायाम गर्ने बानी बसालौं,’ डा. गौतमले भने, ‘प्रदुषण रोक्न धुँवा उत्पन्न हुने क्रियाकलाप नगरौँ।’
त्यसैगरी, मन्त्रालयले अनावश्यक रूपमा सवारी साधन नचलाउन अपिल गरेको छ।
अत्यावश्यक रूपमा निस्कन परेमा अनिवार्य रूपमा मास्ककाे प्रयोग र सामाजिक दुरी कायम गर्न डा. गौतमले अनुरोध गरे।
‘अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कौँ। निस्कँदा अनिवार्य रूपमा मास्ककाे प्रयोग गरौँ। बेलाबेलामा हात, मुख र आँखा धुने बानी बसालौँ,’ डा. गौतमले भने।
उनले बेलाबेलामा हात, मुख र आँखा सफा गर्न पनि आग्रह गरे।
छाती रोग विशेषज्ञ डा. राजु पंगेनीले वायु प्रदुषण आफैंमा खतरनाक भएकाले सचेत रहन आग्रह गरे।
‘गाडी वा डढेलोको धुँवाले आँखा पोल्ने हुनसक्छ। धुलोका कणहरूले आँखा बिझाउने, चिलाउनेजस्ता समस्या देखा पर्नसक्छन्,‘ उनले भने ‘निकै साना साना २ माइक्रोग्रामभन्दा साना धुलो, वा धुँवाका कणहरू सिधै रक्तसञ्चारका माध्यमबाट मुटु वा मिर्गौलासम्म पुग्न पनि सक्छन्।’
वायु प्रदुषणले गर्भमा रहेको बच्चालाई समेत हानी पुर्‍याउन सक्ने उनले बताए। ‘त्यसैले हामी यसबाट बँच्नैपर्छ’ उनले भने ‘विषाक्त्त रसायनहरू मिसिएका कारण दुषित हावा आफैंमा हानिकारक हो।’
Tags: वायु प्रदुषण, विद्यालय बन्द